LinkedIn Na-anwale Njirimara Ngosipụta Ọhụụ Ọhụrụ
Fraịdee, June 28, 2013 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Kevin Mullett
LinkedIn yiri ka ọ na-anwale ọkwa ihu igwe n'ofe mpaghara mmanya isi. Kemgbe ụnyaahụ, na-efegharị akara ngosi ihu igwe na-egosi na ọrụ ahụ bụ "Ike site na anyanwụ365", ndị na-eme a Nchịkọta Google Chrome na ebe nrụọrụ weebụ na ihu igwe anwu365.me. Na, ee, ha na-ekwu “ike,” ọ bụghị “ikike.”
Nke a gosipụtara ule nnwale dị oke njedebe, ma ọ bụ iwepụ ngwa ngwa, ebe ọ bụ na enweghị m ike ịhụ ọbụna otu onye ọzọ na-ahụ njirimara a.
Ajụjụ buru ibu bụ, gịnị kpatara ya? Echere m na m ga-ekwenye na ọtụtụ ndị ga-amalite ụtụtụ ha na LinkedIn ma ọ bụ na ọ nwere ike ime ka saịtị ahụ bụrụ "nnyapade." Nke ahụ dị ka ogologo gbaa m. Kedu ihe ị chere? Nke a ọ bụ njirimara ị ga-achọ inwe na LinkedIn?
Tags: LinkedInahịa mmadụelekọta mmadụ mediatesting
Kevin bụ onye nrụpụta weebụ, onye na-ere ahịa ịntanetị, ọkà okwu, onye na-ede blọgụ ọbịa, yana onye mmebe ihe nrite na-enwe mmeri karịa afọ 13 na ahụmịhe webụsaịtị yana 300 omenala webụ maka otuto ya. Kevin leverages ya afọ 15 ahịa na ahịa ahụmahụ na a ahuhu n'ihi na-elekọta mmadụ media, search engine njikarịcha, oké imewe na usability iji nyere Cirrus ABS ahịa ịga nke ọma online.
Akwụsị Email bufee na Unroll.me
Jun 29, 2013 na 3: 59 PM
Ọ bụ njirimara creep nke ụdị kacha njọ. . . echiche ọjọọ.
Jikọọ na Greg
Julaị 17, 2013, elekere 1:47 nke ehihie
Thx maka post a, Kevin. Ahụrụ m nke a na-apụta na ibe Twitter m izu ole na ole gara aga. Ugbu a ụtụtụ a na LinkedIn. Enweghị m ndọtị Chrome arụnyere. Amaghị m ma ọ masịrị m ma ọ bụ na ọ masịghị m, mana ruo ugbu a ọ dị ka enweghị mmerụ ahụ.